Ukuzala Kwezingulube - eNingizimu Afrika
Ukukhethwa kwamasu okuzalalisa kungasiza ekuthuthukiseni umhlambi, ngokwesibonelo, ukwandisa ubukhulu bemalitha, ukuthuthukisa ikhwalithi yenyama kanye nokukhishwa kwezilwane. Ukuhlwanyela kanye nama-boars akhethwe ukuthuthukisa umhlambi kufanele kube nempilo enhle, eyakhelwe kahle, esimweni esihle, engahambisani nonyaka omuhle.
Izilwane ezizalisayo kufanele zibe nempilo. Ngakho-ke, bheka izibonakaliso zokucindezeleka, ukugula kanye nezinambuzane ze-parasite ngaphambi kokuthenga noma ukuthatha izilwane ezintsha emhlambini wakho. Ingulube enempilo, ngokusho kwePigs ye-Pork Producers Organisation Organic Organic Organisation for profit manual, kufanele iphefumule futhi ingabi nokukhwehlela, ukukhipha, ukuqhuma, ukuqhuma noma ukukhipha umquba. Kufanele abe namajazi amhlophe, angabi amakhanda amaningi noma abe namanxeba, ama-scab, ama-patches ama-discolored, ama-thickenings noma ukukhula.
Kungcono ukuthenga amasheya kubalimi abahloniphekile, kodwa uma uzothengisa endalini ukuqinisekisa ukuthi uyayazi umsuka wengulube futhi ucela isitifiketi sempilo yezilwane. Ama-boars abelwe phakathi kwabalimi abahlukene aphethe ingozi enkulu yokuthola izifo ezithathelwana ngocansi nezinye izifo, ngakho-ke niqiniseke kabili ukuthi lezi zimbongolo ziphilile ngaphambi kokuzisebenzisa emhlambini wakho.
Amathumba noma izitshalo ezitholakalayo kufanele zigcinwe zihlukaniswe nazo zonke ezinye izimvu okungenani amasonto amane. Ngalesi sikhathi izilwane kufanele zihlolwe ngezifo, ziphathwe izidumbu ukuze kuvinjelwe ama-parasites amasha angeniswa emhlambini wakho futhi agonywe uma kunesidingo.
Izingulube akufanele zibe nezisici noma izimo ezingavamile. Ngokusho kwamaPigs for Profit, ohlwanyela kanye nama-boars akhethwe ukuzalanisa kumele abuye abuyele emilenzeni nezinyawo eziqinile. Uma kunenkinga yokuhamba, akufanelekile ukukhiqiza.
Amathumba kufanele abe namagundane amabili athuthukile futhi kufanele ajabule lapho kukhona owesifazane ekushiseni. Isihlwanyelo esingavunyelwe kufanele sibe namathambo ayisishiyagalolunye ahlukanisiwe ngendlela efanayo, kanti ukuhlwanyela okuthuthukisiwe kufanele kube okungenani okungenani 14. Okuhlwanyelayo kufanele kube nomzimba ojulile ngekamelo lensimbi enkulu.
Ukuzalanisa phakathi kubangelwa uma izilwane ezihlobene eduze, njengezingane zakini noma abazali kanye nezingane, zihlangene. Akugcini nje ukwandisa ingozi yokukhubazeka kwezakhi zofuzo ezithwalwa kwinzalo yabo, kodwa futhi kunegalelo elibi ekukhiqizeni.
I-Food and Agriculture Organisation yeZizwe Ezihlangene (i-FAO) incoma ukuthi izikhumba nezinsikazi ezisetshenziselwa ukuxubana, akufanele kube nekhokho elifanayo okungenani izizukulwane ezine emuva kwesizukulwane. Ngakho-ke, abakhiqizi kufanele bagcine irekhodi lemigqa yemindeni emapulazini abo futhi banakekele ukuthenga kuphela noma ukusebenzisa iziboshwa ezingahambisani nemigqa epulazini labo.
Uma ungabona amathambo ngaphansi kwesikhumba, njenge-hip, ihlombe, izimbambo noma umhlane, ingulube incane kakhulu. Ingulube ekhulu kakhulu iyoba nezinkinga zokukhiqiza futhi ingase ihlakulele izinkinga zomlenze nezinyawo.
Ubudala bezilwane kufanele bucatshangelwe, njengoba lokhu kuzoba nethonya ekusebenzeni kahle. Amathumba ngokuvamile agcinwa kuze kube yiminyaka emithathu. Njengoba kuhlwanyela kuhlwanyelwe lapho izilonda zabo ezincane zingasaboni ukuthi zigcina noma zihlakulela izinkinga zokuzala, njengokungena ekushiseni, ukwehluleka ukukhulelwa, ukukhipha isisu, nokukhiqiza izingulube ezingakazalwa noma izilonda ezingakafiki.
Uma uqala epulazini lezingulube, kudingeka ukhethe uhlobo oluzohambisana nezinga lakho lamakhono nokuphatha....more
Ngenxa yokuthi akukho mhlobo ophelele futhi uhlobo ngalunye lukwazi amandla nobukhulu obuhlukile, ukukhethwa kohlobo kuyindaba yokuzikhethela....more
I-Kolbroek iyihlobo lomdabu waseNingizimu Afrika. AbaPietrains bokuqala bangeniswa eNingizimu Afrika ngo-1997. I-Hampshire itholakala ezizalweni ezindala zesiNgisi....more